बन्दना राईलाई सात प्रश्नः ‘दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनले गोर्खाल्याण्ड हुँदैन’ – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsबन्दना राईलाई सात प्रश्नः ‘दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनले गोर्खाल्याण्ड हुँदैन’
बन्दना राईलाई सात प्रश्नः ‘दार्जीलिङ केन्द्रित आन्दोलनले गोर्खाल्याण्ड हुँदैन’
September 8, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, सात प्रश्न 0
प्रश्नः बन्दना राईको सपोर्टमा फेसबुके क्लबहरू निकै सक्रिय देखिन्छ, तपाईँ मुद्दाको लागि आउनु भएको हो कि चर्चाको लागि ?
उत्तरः हामीसँग धेरैवटा समस्या छ। रोजगारको अभाव छ। जसको कारण मान्छे विदेशिनु परिरहेको छ। चेलीबेटी मानव तस्करीको शिकार भइरहेका छन्। जसको एउटा कारण हो हाम्रो आफ्नो राज्य छैन। आज दिल्लीमा मात्रै 12 लाख नेपालीहरू छन्। जसमा 40 प्रतिशत त दार्जीलिङ्गे नै छन्। यो सबको जरा छुट्टै राज्य भएकोले नै म आन्दोलनमा अघि आएकी हुँ। यसरी आउँदा मान्छेले कसरी चर्चामा ल्याए, त्यो म जान्दिनँ। चर्चामा आएपछि नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै हुन्छ। तर म यसको सरोकार राख्दिन। किनकि मलाई कसैको सहनुभूति लिनु छैन। न त कसैलाई भोट माग्नु छ। म केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति आएको हुँ।
प्रश्नः दार्जीलिङ आएर जनतासँग उभिने आँट चाहीँ किन नगर्नु भएको त?
उत्तरः दार्जीलिङ त मेरो घर हो। मेरो त सब थोक त्यहाँ छ। हामी डराएर त्यहाँ नआएका होइनौं। विडम्बना के छ भने 70 सालदेखि हामीले दार्जीलिङलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसैले केही पाएनौं। देशमा धेरैलाई थाहा पनि छैन गोर्खाल्याण्ड राज्य मागेको हो वा देश? अब हामी देशलाई त्यही कुरा बुझाउन चाहन्छौं। सदनमा बिल आउँदा दुवै वटा हाउसको समर्थन चाहिन्छ। यसको निम्ति प्रत्येक राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई मुद्दाबारे अवगत गराउन जरूरी छ। सानो सानो पार्टीलाई सहमतमा ल्याउन सक्नुपर्छ। दार्जीलिङले त 70 सालदेखि गोर्खाल्याण्ड माग्दै छ नि। बदलामा के पाउँदैछौं ?86 सालमा 12 सय मान्छे मारियो। 2011 मा तीन जना माऱ्यो। 2017 मा बाह्र जना मारि सक्यो।
अब भड़्काउ भाषणमा विश्वास गर्नु हुँदैन। किनकि दार्जीलिङमा उफ्रेर गोर्खाल्याण्ड पाइँदैन। गोर्खाल्याण्ड ममताको हातमा पनि छैन। उसो त त्यहाँ मान्छेले बन्द भोगिरहेका छन्। तथापि अब राजधानी केन्द्रित आन्दोलनहरू धेर हुन जरूरी छ। दिल्ली भरौं आन्दोलनहरू गर्नुपर्छ। रामलीला मैदानतिर प्रदर्शन गर्नुपर्छ। उसै पनि दार्जीलिङमा 14 वटा दलको झगड़ा अलगै छ। त्यहाँ हामी थपिए अझ समस्या हुन्छ। आन्दोलनलाई अब राष्ट्रिय रूप दिन जरूरी छ। गोर्खा जहाँ जहाँ छन्, त्यही त्यही सङ्घर्ष हुनुपर्छ। तथापि दार्जीलिङलाई केन्द्र बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। यसैले हामीले दिल्लीमा ट्राइ कलर ऱ्याली गऱ्यौँ। ग्लोबल वर्ल्ड मार्च गऱ्यौँ। चेन्नइमा ब्ल्याक बेलुन डे पालन गऱ्यौँ। किनकि हामी मुद्दालाई नेशनल इश्यू बनाउन चाहन्छौं। यो संवैधानिक माग हो। अल ओभर इण्डियाबाट नै आज यो माग उठिरहेको छ। देशको सर्वभौमिकतालाई हेरेर हामीले राज्य माग्दैछौं। यो कुराबारे देशलाई बुझाउन जरूरी छ।
प्रश्नः पहाड़ बन्दको विकल्प के हुनसक्छ ?
उत्तरः आम मान्छे हताश हुनै सक्छ। बङ्गालले डिभाइड एण्ड रूल गर्छ। हाम्रै मान्छेलाई मार्न सक्छ। तथापि हामीले युनाइटेड्ली पिपल्स मुभमेन्ट छोड़्नु हुँदैन। एकार्कामा आरोप लगाउने खेल बन्द गर्नुपर्छ। पास्ट भुलेर प्रेसेन्टको सङ्घर्षमा आउनु पर्छ। जन आन्दोलनलाई संयुक्त रूपमा अघि लैजानुपर्छ।
प्रश्नः गोर्खाल्याण्डको निम्ति एफिडेफिट गर्नु भयो, यो तपाईँको राजनैतिक अज्ञानता हो कि भावुकता ?
उत्तरः एउटा वकील भएको नाताले एफिडेफिटको भेल्यू मलाई थाहा छ। मेरो लागि त्यो एउटा प्रोमिसिङ हो। कसम खाएको बराबर हो। म कहिले बिक्री हुने छैन। कुनै पद लिने छैन। गोर्खाल्याण्डको लागि गलत कार्य गर्ने छैन। मेरोमा राजनैतिक अज्ञानता हुनै सक्छ। आन्दोलनमा राजनीतिको कुरै आउदैन । म राजनीतिमा जाने मान्छे पनि होइन। म त केवल एउटा एक्टिभिस्ट हुँ। चुनाउमा उठ्ने र भोट माग्ने गल्ती म गर्ने छैन।
प्रश्नःआन्दोलनकारीको मुख्य शत्रु चाहीँ को हो नि?
उत्तरः हाम्रो शत्रु हामी नै हौं। किनकि हामी विभाजित छौं। हामी माइग्रेट भएर आएका होइनौं। यो हाम्रो भूमि हो। ब्रिटिशले दार्जीलिङको निम्ति जे गरे, त्यस बाहेक बङ्गालले केही गरेको छैन। उल्टो 40 प्रतिशत रेभन्यू खाएर बसिराखेको छ। सांसदलाई चाहीँ हामीले काम लगाउन सक्नुपर्छ। किनकि उसलाई हामीले पठाएका हौं।
प्रश्नः बन्दना राईहरूले जाति विभाजन गऱ्यो भन्ने आरोपहरू पनि अघि आयो नि?
उत्तरः गोर्खाल्याण्डको निम्ति त हामीले विश्वका गोर्खाहरूलाई जोड़ेका छौं। हाम्रो वान पोइन्ट एजेन्डा केवल गोर्खाल्याण्ड हो। कुनै पार्टीको सिद्धान्तमा हामी बाँधिएका छैनौं। न त कुनै सत्ताको विरोध नै गरेका छौं। हाम्रो माग सय वर्षसम्म पूरा नभएको कारण दार्जीलिङमात्रै हेर्दा हो। वास्तवमा परिचयको कारण पनि गोर्खाल्याण्ड पाउने होइन। हामीले त संविधानको आधारमा गोर्खाल्याण्ड बनाउने हो। गोर्खाल्याण्ड देशको सर्वभौमिकताको निम्ति हो। यो नेशनल इश्यू हो। यो मात्रै यस्तो राज्य हुनेछ, जो तीनवटा अन्तराष्ट्रिय सीमानामा पर्नेछ। गोर्खाल्याण्ड केवल गोर्खाको निम्ति मात्रै पनि होइन। त्यहाँ रहने बङ्गाली, शीख, इशाई, लेप्चा, भोटे लगायत समस्त नेपाली भाषीहरूको निम्ति हो। हामीले यी सबैलाई नै वान पोइन्ट एजेन्डाको निम्ति जोड़्ने कोशिश गरिरहेका छौं।
प्रश्नः दार्जीलिङ केन्द्रित दलहरूलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
उत्तरः सब भन्दा ठूलो कुरा यूनिटी इन इन्टिग्रिटी चाहिन्छ। आन्दोलन भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले आपस्तको मतभेद भुल्न जरूरी छ।नयाँ पीँढिको निम्ति हामीले उदाहरण पेश गर्नुपर्छ। यसको निम्ति तपाईँहरू एक सूत्रमा बाँधिएर हामीलाई लिड गर्नुहोस्। अघि कसले के गरे ? सब बिर्सिदिनुहोस्। एउटै भोइस लिएर गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि आउनुहोस्।
फेरि तातियो दार्जीलिङ : गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूमाथि लाठीचार्ज